आखिर किन यस्तो बलियो हुन्छ नोकिया ? नोकिया फोनको बारेमा १० रोचक जानकारीहरु, जुन तपाईलाई सायदै थाहा होला (एकपल्ट सबैले हेर्नुहोला) – पुरा पढ्नुहोस्……
आखिर किन यस्तो बलियो हुन्छ नोकिया ? नोकिया फोनको बारेमा १० रोचक जानकारीहरु, जुन तपाईलाई सायदै थाहा होला (एकपल्ट सबैले हेर्नुहोला)
सायद हामिहरु मध्य नोकिया फोन प्रयोग नगरेका हरु कमै छौ होला । कतिले त अझै पनि नोकिया फोन नै प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ होला । नोकियाले आफ्नो उत्पादन पुन: सुरु गरेपछी किनेर चलाउने हरु पनि हुनुहुन्छ होला ।
पिपल गेडी र पाहुर बिस्कुट “मिस” गर्दा झै नोकिया फोन “मिस” गर्ने हरु पनि पक्कै हुनुहुन्छ । नोकिया फोन प्रती को आकर्षण को कारण भनेको यसको मज्बुती र गुण्स्तर नै हो । वास्तवमै नोकिया निकै नै टिकाउ फोन बनेको छ ।
यती सम्म कि बिभिन्न सामजिक सन्जाल हरुमा नोकिया को मज्बुती लाई लिएर बनेका धेरै थरिका ब्यङ्यात्मक पोस्ट हरु निकै नै देख्न पाहिन्छ। जस्तै कि: सामसुङ खसे स्क्रीन फुट्छ , नोकिया खसे जमिन नै फुट्छ र आईफोन खसे फोनको साहुको मुटु फुट्छ । रमाइलो को लागी मात्र यो प्रसँग उठायौ ।
अब सुरु गरौ नोकिया फोन को बारेमा यस्ता १० रोचक जानकारी हरु जुन तपाईं हामी मध्य धेरै लाई थाहा छैन ।
नोकियाको बारेमा १० रोचक जानकारी हरु:
नोकिया ३३१० फोनको भन्दा धेरै समय ब्याट्री टिक्ने फोन आहिलेसम्म बजार मा उपलब्ध छैनन । एकपटक पुरा चार्ज गरेपछी लगातार ५५ घण्टा कल गर्न पुग्ने ब्याकअप नोकिया ३३१० को ब्याट्री ले दिन्छ ।
प्राय स्मार्टफोन हरु एकपटक अफ गरेर अन गरिसके पछी चलाउन को लागी तयार हुन २० सेकेन्ड समय लिन्छन्, जबकी नोकिया ८ सेकेन्ड मै तयार हुन्छ ।
फिनल्यान्ड मा नोकिया लाई “Indestructible” ( अबिनासकारी ) को उपनाम दिइएको छ । यतिसम्म कि नोकिया ३३१० लाई फिनल्यान्डले राष्ट्रिय चिन्ह तोकेको छ ।
नोकिया मा रहेको “स्नेक” खेल , सबैभन्दा धेरै जनाले खेलेको मोबाईल खेल को रुपमा बिश्व कृतिमान राख्न सफल भएको थियो । सन् २०१० मा उक्त कृतिमान राख्दा सम्म मात्र यो खेल १ करोड जना भन्दा धेरै मोबाईल प्रयोगकर्ताले खेलेका थिए ।
आफुले बोकेको नोकिया ३३१० को कारण ले अफ्गानिस्तानका एक सैनिक लाई छातीमा गोली लाग्न बाट बचाएको थियो । यो बिषय उक्त समयमा सामजिक सन्जालहरु मा निकै भाइरल बनेको थियो ।
आन्तरिक एन्टिना को प्रयोगको सुरुवात नोकिया बाट नै भएको थियो ।
टाइपिङ मा Auto-correct को अप्सन भित्राउने पनि नोकिया नै थियो।
आईफोन पहिलो पटक लन्च हुँदा २ करोड ५० लाख थान बिक्री भएको थियो,जबकी नोकिया पहिलो पटक लन्च हुँदा १ अर्ब २६ लाख थान बिक्री भएको थियो ।
केहि समयअघी मात्र बेलायत को पत्रीका The Sun Newspaper ले एउटा लेख प्रकासन गरेको थियो । एक ब्यक्ती जसले सन् २००० मा नोकिया ३३१० किनेर आहिले २०१७ सम्म पनि उहि फोन बिना कुनै समस्या चलाईरहेको बिषय मा एउटा रोचक जानकारी उक्त लेखमा उल्लेख गरिएको थियो ।
मोबाईलमा पहिलो पटक ईन्टरनेट च्याट को सुबिधा दिने मोबाईल नोकिया ३३१० नै थियो ।
यो जानकारी कस्तो लाग्यो राम्रो लागे अबस्य शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला |
Prevबैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना, बैदेशिक रोजगार विभागले बिदेशमा रहेका नेपालीको लागि यि सुविधाहरु प्रदान गर्दै
Nextयी चेलीले नडराइ ३ करोड नेपालीका लागि मोदी र मुकुन्देलाई चेतावनी, रबीलाई यसो भनिन (भिडियो सहित)
रबि लामिछानेको अचम्मको भविष्यवाणी, चितवनमा एकाएक माता जागेपछि -(भिडियो हेर्नुहोस्)
भारतीय संगीत क्षेत्रमा नेपाली चेलीको महायात्रा : मेनुका पौडेलल फेरि मच्चाईन स्वरको जादूबाट तहल्का, पुगिन टप तेह्रमा-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
आजको राशीफलः वि.सं. २०७५ आषाढ १८ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ जुलाई ०२ तारिख,